Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅
ပြင်ချင်ရင် လည်း အလွယ်လေးပါ။
ကာလုံမှာ လူ၁၁ ယောက်မဲခွဲရင်.. ၆ယောက်ကအသာဖြစ်မှာကို… အဲဒီ၆ယောက်က ကာချုပ်လူတွေချည်းဖြစ်နေတာကတချက်..။
၂၀၁၅ ဟာ ဒုတိယ ၁၉၉၀ တော့ လုံးဝ မဖြစ်နိူင်ပါ ၊
အခုကြားနေရတာက ဟာ တစ်ပြည်လုံးမှာ ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလား ၊
အဲဒါဆိုရင် ပြည်နယ်တွေမှာ မဲတွေပြန့်သွားပါလိမ့်မယ် ၊
US က သမ္မတတွေ ဒေါ်စုထက်တောင် အသက်ကြီးသေးတယ် မဟုတ်လား။
ဒေါ်စုက အခုလ အသက်၇၀ပြည့်မှာမို့.. သမ္မတဖြစ်ရင်တောင်.. ၇၀ကျော်..။
ကျေးဇူးအထူးပါ သဂျီး.. ကူးပြီး ရှယ်ပါမယ်… ပါတီကြည့်မရွေးဘူး.. လူကိုပဲ ကြည့်ရွေးမယ်တဲ့.. လူဆိုတာ ပါတီက မတက်လို့ ဘယ်က တက်ရမတုန်း… စိတ်တွေလည်း လေပါ့…
အဓိက ကတော့ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့ လိုတာပါပဲ သဂျီးရယ်… ဘယ်သူပဲ တက်လာ တက်လာ ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်အရင်းခံပါလာဖို့ပဲ လိုပါတယ်… ဒါနဲ့ စကားမစပ် တဂျီးလည်း အမတ်လောင်း ၀င်ရွေးခံပါလား…..
.မြန်မာပြည်တွင်း စိန့်ပြည်၏ရင်းနှီးမြုတ်နှံထားမှုတို့ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း။.. .
.မြှုတ်နှံ အစား မြှုပ်နှံ လို့ ပြောင်းသင့်တယ်ထင့်…
ကျန်တာတော့ မပြောတတ် ..
. အဲဒီတော့ …
အခြေခံဥပဒေအရရော.. မရရော…. အစိမ်းနဲ့အ၀ါက.. အာဏာခွဲဝေမျှစား.. သိမ်းထားပြီးသားဆိုတဲ့သဘောပါ..။ အလယ်ခေတ်ဥရောပအတိုင်းဖြစ်နေတာ..။
ဒီဂွင်လေးတောင်.. သူတို့ ပေးမှရတာ..ဆိုတဲ့.. သဘော..။ သဘော…။
The Voice Weekly’s photo.
သူကြီး ရဲ့ အဝါရောင် ကို အသားလွတ် မဲ နေတဲ့ ရောဂါ က ပိုသာဆိုး လာသလိုဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၀ါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာ တွေ့ဆုံခြင်း
ဖယ်ဒရယ်စနစ်ရဲ့သဘောကို ထင်ဟတ်တဲ့.. သတင်းမို့တင်တာပါ…။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံလို့.. ကပေါက်ကထင်နေတုံးကိုး…
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက် ၍ ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုကို စဉ်းစားတော့မည်မဟုတ် ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားသည်။ ‘‘ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အန်တီက သိပ်ပြီးတော့ မစဉ်းစား ဘူး။ ခြောက်ပွင့်ဆိုင်အကြောင်း၊ မစဉ်းစားတော့ဘူး။စဉ်းစားနေရင် လည်း နည်းနည်းအချိန်ပိုကုန်တာ ပဲရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာပဲ ဆက်ပြီးလုပ်သွားတော့မယ်’’ဟု ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင် ဆင်ရာတွင် အခက်အခဲမဖြစ်စေ ရန် ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုကို မူလက ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြု လုပ်ရန် သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ သော်လည်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အရေး ကြီးပုဒ်မအချို့ကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်အတွင်း အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးရာတွင် အကျပ်အတည်း မဖြစ်ပေါ်စေရန် ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံမှုကို နှစ်ကုန်ပိုင်း၌ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီး ယခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းတွင် ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံမှုတစ် ကြိမ်သာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပထမအကြိမ်တွေ့ ဆုံရာတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊လွတ် လပ်ပြီးတရားမျှတသော ရွေး ကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စသည့် အခြေခံမူဘောင်များကို နှစ်နာရီ ကျော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ အဖြေထွက်ခဲ့ခြင်းမ ရှိခဲ့ဘဲ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမည့် အချိန်ကာလပင် မသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ ပေ။ အဆိုပါခြောက် ပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံမှုတွင် ပါဝင်သူများမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦး ခင်အောင်မြင့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ဖြစ်သည်။ 7daysdailynews
ပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဌကလည်း ခြေဥ ပြင်ချင်ပုံရတယ်..။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၅၉-ဃ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပူးတွဲပြုလုပ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။